El Salvador nakweere Bitcoin dị ka ego iwu ya, Bitcoin na -akụda
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na El Salvador » El Salvador nakweere Bitcoin dị ka ego iwu ya, Bitcoin na -akụda
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na El Salvador • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Technology • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
A manyere gọọmentị El Salvador iwere obere akpa dijitalụ mba Chivo na -anọghị n'ịntanetị ka ọ na -ama jijiji iji bulie ikike sava.
Nkuchi crypto nke gọọmentị nke izizi n'ụwa na-amalite mmalite dị egwu.
Gọọmentị El Salvador wepụrụ obere akpa dijitalụ nke mba na -anọghị n'ịntanetị iji bulie ikike sava.
Bitcoin na -agbada mgbe El Salvador nabatara ya dị ka ego iwu.
Ọnụahịa nke ọnụọgụ dijitalụ nke ụwa mbụ, bitcoin, gbadara ruo 16% ruo ihe dị ka $ 43,100 mgbe ọ gafesịrị $ 52,000 mbubreyo Mọnde.
Onye isi ala El Salvador Nayib Bukele
Bitcoin dara mgbe gọọmentị El Salvador nabatara ya dị ka ego iwu obodo. Mkpesa ndị mmadụ mere n'okporo ụzọ wee gbuo nwa ọrụ crypto nke mbụ na-arụ ọrụ n'ụwa.
Bitcoin Ihe kpatara ọgba aghara bụ nsogbu teknụzụ nke mere ka gọọmentị El Salvador were obere akpa dijitalụ nke obodo Chivo na -anọghị n'ịntanetị ka ọ na -ama jijiji iji bulie ikike sava.
“Anyị ewepụla ya ka anyị na -abawanye ike nke sava ihe onyonyo a. Nsogbu nrụnye nke ụfọdụ ndị mmadụ nwere bụ maka nke ahụ, ”Onye isi ala Nayib Bukele dere na tweet, na -ekwu maka ndọghachi azụ ahụ.
Cryptocurrency jisiri ike ịlaghachi azụ kemgbe ahụ, wee gbadata karịa 13% iji zụọ ahịa na $ 45,512.
Ka ọ dị ugbua, otu ndị ngagharị iwe na -eme ngagharị iwe megide iwu ọhụrụ bitcoin gara n'okporo ụzọ isi obodo San Salvador. A kọrọ na ndị na -eme ngagharị iwe a na -eme ngagharị iwe n'ihi enweghị ihe ọmụma gbasara cryptocurrency na otu aga -etinye iwu bitcoin ọhụrụ ahụ.
El Salvador O juru ụwa crypto na ụwa anya na mbido afọ a mgbe Onye isi ala Bukele kwupụtara atụmatụ ịnabata bitcoin dị ka iwu n'akụkụ dollar US, nke ejirila na mba ahụ kemgbe 2001.